Icala EliseNkantolo Ephakeme YaseRussia, Usuku Lwesihlanu: Kubuyekezwa Amacala Abekwe OFakazi Phakathi Neminyaka Eyishumi Edlule
ULIMI ISpanishi Isi-Albania Isi-Armenia Isi-Estonia Isi-Iloko Isi-Indonesia Isi-Ukraine IsiBhunu IsiChewa IsiCroatia IsiCzech IsiDanishi IsiDashi IsiFinishi IsiFulentshi IsiGeorgia IsiGreki IsiHausa IsiHungary IsiJalimane IsiJapane IsiKinyarwanda IsiKirghiz IsiKorea IsiLithuania IsiMalagasy IsiMyanmar IsiNgisi IsiNorway IsiNtaliyane IsiPedi IsiPolishi IsiPutukezi IsiRashiya IsiRomania IsiSerbia IsiSerbia (SesiRoma) IsiShayina SesiMandarin (Esenziwe Lula) IsiShayina SesiMandarin (Sezinhlamvu Zakudala) IsiSinhala IsiSlovak IsiSlovenia IsiSwahili IsiTagalog IsiThai IsiTsonga IsiTswana IsiTumbuka IsiTurkey IsiVietnam IsiYoruba IsiZulu ULimi Lwezandla Lwase-Italy ULimi Lwezandla LwaseMelika
EPHRELI 19, 2017
Usuku Lwesihlanu Lwecala EliseNkantolo Ephakeme YaseRussia: Kubuyekezwa Amacala Abekwe OFakazi Phakathi Neminyaka Eyishumi Edlule
ENEW YORK—NgoLwesithathu, Ephreli 19, 2017, kufike abantu abangaba ngu-300 (abanye bafike ngo-2:00 ekuseni) osukwini lwesihlanu lokuqulwa kwecala eNkantolo Ephakeme YaseRussia, njengoba uMnyango Wezobulungisa ufuna kuvalwe iHhovisi Lokuqondisa LoFakazi BakaJehova. Kubuyekezwe ukuphathwa kabi koFakazi yiziphathimandla zaseRussia phakathi neminyaka eyishumi edlule njengoba iNkantolo ibihlola imiqulu engu-43 yezincwadi zobufakazi ezethulwe phambi kwenkantolo.
INkantolo ihlole imiqulu engu-43 yezincwadi zobufakazi ezethuliwe.
Phakathi nalokho kubuyekeza, abameli abamelele uMnyango Wezobulungisa bahlulekile ukusho izizathu ezingokomthetho eziphathekayo zokuthi kungani befuna kuvalwe iHhovisi Lokuqondisa noma iziNhlangano Zenkolo Zendawo (LRO) zoFakazi BakaJehova eRussisa noma ukusho izenzo ezeqisayo abazenzayo. UYury Toporov, ongomunye wabameli beHhovisi Lokuqondisa, utshele iNkantolo ukuthi izinto eziningi ezethulwe ecaleni zihlanganisa imiklomelo nezincwadi zokubonga uhulumeni azinika iHhovisi Lokuqondisa. Lokhu kufakazela ukuthi eminyakeni eminingi iziphathimandla bezilokhu zibheka iHhovisi Lokuqondisa njengelineqhaza elihle emphakathini. Kuphinde kwashiwo ukuthi iziNhlangano Zenkolo Zendawo nazo zineqhaza elifanayo emphakathini. Ngaphezu kwalokho, eminingi yemiqulu ethulwe ecaleni ibonisa ukuthi uMnyango Wezobulungisa ubulokhu uphenya iziNhlangano Zenkolo Zendawo ezisetshenziswa oFakazi BakaJehova eRussia kusukela ngo-2008, kodwa awutholanga lutho olweqisayo. Abameli boMnyango Wezobulungisa balivumile leli phuzu.
Abaphambili, kusukela kwesobunxele kuya kwesokudla: u-Anton Omelchenko, uMaksim Novakov, uVictor Zhenkov noYury Toporov, abameli beHhovisi Lokuqondisa LoFakazi BakaJehova eRussia. Abasemuva, kusukela kwesobunxele kuya kwesokudla: uVasiliy Kalin noSergey Cherepanov (ongabonakali kahle), amalungu ekomiti elengamele eHhovisi Lokuqondisa LoFakazi BakaJehova eRussia.
INkantolo kulindeleke ukuba iqhubeke nokuqulwa kwecala ngo-Ephreli 20, 2017, ngo-2:00 ntambama.
Emhlabeni wonke: UDavid A. Semonian, IHhovisi Lemininingwane Yabezindaba, +1-845-524-3000